Momba anay - "EducationBro" - Fianarana an-tany hafa Magazine
Tantara ny Voninahitra
Isika tanora tetikasa, fa amin'ny midadasika sy mahaliana ny tantara. Ny mpanorina ny tetikasa nandeha be mba hamorona vaovao tanteraka, tsy manam-paharoa sy ny mahasoa “EducationBro” – Fianarana an-tany hafa Magazine.
Ny ekipa iraisam-pirenena iraisam-pirenena ahitana ny mpianatra sy ny mpampianatra miaraka amin'ny traikefa lehibe, Rector ny oniversite, tanora mpandraharaha sy mavitrika amin'ny fiainana mahaliana ny olona amin'ny zavatra niainana.
Fantatsika ny zava-tsarotra ny fianarana any ivelany:
toy ny mpampianatra;
toy ny anjerimanontolo;
toy ny ray aman-dreny.
Isan'andro, isika mampiditra endri-javatra vaovao mba hahatonga ny fianarana any ampitan-dranomasina mampahazo aina kokoa.
Ny olon-drehetra dia tokony hanana ny fahafahana handray ny fanabeazana ao amin'ny firenena izay tiany sy “EducationBro” will helps with it. The “EducationBro” gazety dia “tendron'ny ravin-vaingan-dranomandry”, tsy ho ela dia hamela anao hifidy ny asa izay tianao. Mifidiana ny firenena izay hifanaraka anao sy ny kalitaon'ny fampianarana, ary ny vidim-fanabeazana sy ny fari-piainana. Enroll to the best university and easy to get a quality education. Ary avy eo dia manomboka ny asa amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao.
izany rehetra izany “EducationBro” afaka.